Switzerland nwere ike belata ohere ịnweta ọrụ dijitalụ Ọ nwere ike ime na Spain? | Akụkọ akụrụngwa
Switzerland nwere ike belata ohere ịnweta ọrụ dijitalụ Ọ nwere ike ime na Spain?
Ma ọ bụ na okwu Switzerland na-ada ada na mba niile nke European Union n'ihi mmụba nke okporo ụzọ netwọkụ na-ata ahụhụ ụbọchị ndị a. Ee, ndị Federal Council na - arụ ụka ugbu a maka nwa oge bee ịnweta ọrụ dijitalụ ma ọ bụ nyiwe dijitalụ nke na-akụda netwọk ma enwere ike iwere dị ka 'obere mkpa'.
N'oge a ọ bụ naanị ihe na-akwadoghị na ndị ọrụ Switzerland nwere ike ịga n'ihu na-elele usoro Netflix ha, HBO, vidiyo YouTube na ọdịnaya ndị ọzọ na-asọpụta na-enweghị nsogbu, mana ọnọdụ mkpu nke ndị isi obodo nyere iwu mere ka njikọ ahụ dị n'okpuru nnukwu ọchịchọ na ike igbochi ma ọ bụ ime ka ọrụ telivishọn dị mgbagwoju anya ezumike ahụ.
Ọ bụ ya mere onye na-ekwuchitere Switzerlandcom ji kpọtụrụ ndị mgbasa ozi German NZZ, na-akọwa na oke ibu nwere ike ibute ọdịda nke netwọkụ na nke a na-emetụta njikọ nke ndị chọrọ ezigbo njikọ na sistemu maka ọrụ ha n'ụlọ. Mgbe anyị kwusịrị nke ahụ, anyị ga-edo anya na njikọ fiber optic na Switzerland na mba ndị ọzọ na-abụghị Spain adịghị njọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị dị ala karịa nke anyị. Ọ nwere ike iju gị anya ebe ọ bụ na ọtụtụ puku ndị ahịa nọ na mba anyị "na-adọkpụ" ADSL, mana ọ bụ eziokwu, ntinye nke fiber optic na mba anyị dị oke elu ma e jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ.
Na Spain, ndị ọrụ na-ekwu maka iji ọrụ eme ihe
Ọ na-esiri anyị ike na mba anyị nwere nsogbu n'ihi oke mmụba nke okporo ụzọ, o doro anya na anyị nwere ike ịhụ ikpe akọwapụtara ma ọ bụ oge nke ụbọchị netwọkụ jupụtara karịa ka ọ dị na mbụ. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị ọrụ ka nwere Njikọ ADSL ma ọ bụ na-eji netwọk 4G inwe ịntanetị n'ime ime obodo ya mere ndị ọrụ nke mba anyị na-arịọ maka iji ọrụ eme ihe n'ụzọ na-enweghị mmegbu ka anyị niile nwee ike ịnụ ụtọ njikọ ahụ na-enweghị ida.
Nyaahụ Tado, ụlọ ọrụ na-eme ngwa maka akpaaka ụlọ, dara ọdịda na sava ya nke hapụrụ ndị ọrụ nke ngwaọrụ ndị a na-anọghị n'ịntanetị, ihe akọwapụtara nke eweghachitere ozugbo mana nke a nwere ike ịbụ obere n'ihi saturation nke netwọkụ na nnukwu ndị ọrụ ebe a na-ekwu maka ibu ọrụ nke ojiji ka anyi nile wee nwee obi uto ndi "extra GB bonuses" nke ha nyere anyi na karia. Banyere teleworking ma ọ bụ tele-ọzụzụ ọmụmụ na Spain ha na-arụ ọrụ nke ọma, mana ndị ọrụ ndị ọzọ kwesịrị ịmara nke a ma jiri netwọkụ na-enweghị mmegbu iji zere mbelata. N'ezie, netwọk na-eji usoro ihe eji eme ihe n'izu ndị a na-abawanye nke ọma, na nke a, anyị ga-abụrịrị ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Switzerland nwere ike belata ohere ịnweta ọrụ dijitalụ Ọ nwere ike ime na Spain?
Netflix Party, kporie ndu gi kacha nma na ndi enyi
Ihe nkiri kacha mma na-efe efe ikiri n'oge iche iche